Miroborobo Ny Polisy Mihira Ao Oganda · Global Voices teny Malagasy
Miroborobo Ny Polisy Mihira Ao Oganda
Voadika ny 02 Septambra 2016 16:43 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary Youtube Kaazi Yetu.
Iray amin'ireo singa ara-kolontsaina manan-danja indrindra amin'ny ankamaroan'ny fiainan'ny Ogandey ny mozika, tsy mahagaga raha nihamatanjaka nandritra ny taona maro ny sahan'ny mozika
Ny tena mety mahagaga kokoa dia misakaiza amin'ireo mpiangaly mozika matihanina ny mpanao politika, ny manamboninahitra miaramila sy polisy.
Tamin'ny 1981, nanana miaramila manamboninahitra mpihira nahomby ara-barotra voalohany, Sergeant Kifulugunyu i Oganda.
Ny mozikany no nampazotozoto ireo miaramila manamboninahitra maro tao anatin'ny ady akata nitondra ny filoha ankehitriny, Yoweri Museveni Kaguta teo amin'ny fitondrana. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1990, iray tamin'ireo mpanakanto nisandratra indrindra tao amin'ny firenena i Sergent Kifulugunyu .
Amin'ny lahatsary eto ambany, miresaka amin'ny NTV Oganda momba ny zavatra niainany amin'ny mozika nandritra sy taorian'ny ady i Sergent Kifulugunyu. Iray amin'ireo mpanakanto Ogandey niahiahy manoloana ny hala-tahaka izy. Novain'ilay mpanakanto ao an-toerana Gravity Omutujju ny hiran'i Kifulugunyu “Kibonge” ary nomeny lohateny hoe “Omwoto” tsy nahazoana alalana tany aminy, hoy izy.
Anisan'ireo manamboninahitry ny fiarovana hafa nanatevin-daharana ny indositrian'ny mozika ankehitriny i Afande Karangwa sy i Afande Mia ary i Afande OJ avy ao amin'ny polisy. Mikasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny asa[m-panjakana] sivily, indrindra indrindra ny an'ny polisy ny hiran'ireto olon-droa mihira voalaza farany ireto.
Iray amin'ireo lahatsary natao vao haingana ny “Kaazi Yetu”, teny Swahili midika hoe “Asanay”. Ao anatin'izany, miresaka momba ny asan ‘ny polisy, mitanisa sy misaotra ny olona samihafa, anisan'izany ny Filoha Yoweri Museveni, ny Inspektera Jeneralin'ny Polisy, ny Jeneraly Kale Kayihura sy ny hafa ny hiran'ireo olon-droa mihira.
Nozarain'ireo mpisera Youtube sy Facebook marobe ny lahatsarin'izy ireo, ary nahazo mpijery maherin'ny 10.000 avokoa ny lahatsary tsirairay.
Nahitàna fihetseham-po samihafa teo amin'ireo mpamaky ny tranonkala Daily Monitor ao Oganda, ny sasany faly ary ny hafa nitsikera ny fihetsiky ny manamboninahitra mihira sy mandihy nefa mbola manao fanamiana polisy.
Nientanentana i Nyaralego fa nametraka ny basy ny manamboninahitra ary mifalifaly;
aaaaaoooo…avy any amin'ny AK47 mankany amin'ny ndomblo ya solo. (Ndombolo ya solo manondro ny karazana mozika sy dihy malaza Kongoley).
Mihevitra i Ug_Ug fa nandika ny fitsipi-pitondrantenan'ny polisy ireo manamboninahitra:
Manana fitsipi-pitondran-tena ny polisy maneran-tany, ny sasany ohatra tsy mba misotro toaka imasombahoaka rehefa eo am-perinasa manao fanamiana polisy; tahaka izany koa ny fitondran-tena ratsy mandihy miaraka amin'ny fanamiana eny amin'ny toerana imasom-bahoaka tsy nahazo alàlana avy any ambony. Tokony nampidirina am-ponja teo no ho eo ry zalahy ireo, saingy toa tsy mahalala ny fitsipi-pitondrantenan'izy ireo manokana ny polisin'ny M7's [anaram-bositry ny Filoha Museveni] tahaka Azy filoha ihany!
Ireo lahatsary ireo dia novokarina sy navoaka nahazo fankatoavan'ny mpitandro ny filaminana, izay nanome fandraisana anjara hatramin'ny 5.000 dolara amerikana tamin'ny famokarana.
Faly tamin'ireo manamboninahitra i Ajigak ary manoro hevitra azy ireo mba hivarotra ny mozikan'izy ireo matetika kokoa mba hampitombo ny karama kelin'ny polisy.
Tsara ny fahaizana mamorona mba hanampiana ny karama kely raisin'ny polisy fa tsy ny mpanao politika tenda-kanina. Bravo ho an'ny manamboninahitra, ilaina ny mivarotra ny mozikanareo mba hahazoana vola bebe kokoa.